Wararka - Shan sano oo ka mid ah dhimista awoodda, miisaanka-luminta birta ayaa dib u milicsanaya
Khibrad Soosaarid 16 Sano ah
Qarax Bamka Dhuxul Foornada
Qalabka Barroosinka Is Qodista
Shan sano oo ah dhimista awoodda, birta culeyska-luminta dib u eeg
Dhawaan, Guddiga Horumarinta iyo Dib-u-habeynta iyo Wasaaradda Warshadaha iyo Teknoolojiyada waxay ku dhawaaqeen inay qabanqaabin doonaan baaritaanka guud ee dalka oo dhan “dib u jaleec” yareynta awoodda birta iyo yareynta wax soo saarka birta ceyriin sannadka 2021. Mar sii horreysay, Xiao Yaqing, Wasiirka Warshadaha iyo Teknolojiyada Macluumaadka, ayaa sidoo kale sheegay in hareeraha yoolka "laba kaarboon", ay lagama maarmaan tahay in si adag loo yareeyo soo saarista birta ceyriin. Inta lagu guda jiro shanta sano ee yareynta awoodda wax soo saarka, warshadaha biraha ayaa wajahaya isbeddelo iyo caqabado cusub.
Shan sano jirsiga "dib u jaleec"
"Laga bilaabo 2016, waxay qaadan doontaa shan sano in la yareeyo awooda wax soo saarka birta ceyriin 100 milyan ilaa 150 milyan oo tan." Tani waa bartilmaameedka shaqada ee horey loogu qeexay "Fikradaha Golaha Gobolka ee Xallinta Awoodda Xad dhaafka ah ee Warshadaha Birta iyo Birta si loo Xaqiijiyo Horumarka Dhibaatooyinka.
Bishii Maarso 1, Xiao Yaqing wuxuu ku soo bandhigay shir jaraa'id in tan iyo 2016, istiraatiijiyadda "seddex ka saarid, hal hoos u dhig iyo hal dheeri" ay horumar weyn ka sameysay yareynta awoodda wax soo saarka birta, taas oo horeyba u cadaadisay 170 milyan oo tan oo ah awoodda wax soo saarka birta. Waxaa la fahansan yahay in wadarta awooda wax soo saarka birta ceyriin ee ka baxday "shirkadaha zombie" ay gaareen 64.74 milyan tan.
Si si fiican loo fuliyo marxaladda xigta ee yareynta awoodda, sanadka 2021, nooca cusub ee dalkayga ee hirgelinta tallaabooyinka beddelka awoodda birta iyo diiwaangelinta mashruuca birta iyo dukumiintiyo kale oo muhiim ah ayaa la soo saari doonaa si loo hubiyo in wadarta guud ee wax soo saarka birta la dhimayo oo keliya .
Xakamaynta saamiga beddelka ayaa ah qaab muhiim ah oo lagu gaaro isku-dhafka dabiiciga ah ee mamnuucaya awoodda wax-soo-saarka cusub iyo hagaajinta qaabdhismeedka. Sida laga soo xigtay xogta, tan iyo markii la hirgeliyay Tallaabooyinka Hirgelinta ee Beddelidda Awoodda ee Warshadaha Birta iyo Birta sannadka 2018, illaa sannadka 2020, 16.25 milyan oo tan oo ah wax soo saar bir ah ayaa laga laabtay, iyadoo bixitaanka saafiga ah ee 26.3 milyan oo tan, iyadoo guud ahaan saamiga bixitaanka ee 1.15: 1.
Isku biiritaanka iyo dib u habeynta ayaa sidoo kale si isdaba joog ah u socda. Sannadkii hore, Shiinaha Baowu wuxuu si isdaba-joog ah u abaabulay Maanshan Iron iyo Steel iyo Chongqing Iron iyo steel si ay u ballaariso dhulkeeda. Jiangsu Xuzhou waxay qorsheyneysaa inay hagaajiso oo ay dhex gasho 18 shirkadaha birta iyo birta ah si ay u sameystaan ​​2 bir iyo baaxad weyn oo isku duuban sanadka gudihiisa, ayna gaaraan hoos u dhig ka badan 30% awoodda wax soo saarka birta sanadka 2020.
Hadafkii hore ee yareynta awooda badan ayaa la gaaray. Sannadkan "dib-u-eegis" yareyn la'aanta birta ayaa diiradda saari doonta kormeerka hirgelinta shaqada cilad-celinta birta iyo hagaajinta dhammaan gobollada ay khuseyso tan iyo 2016. Furaha ayaa ah in la xalliyo awoodda wax-soo-saarka biraha ee xad-dhaafka ah iyo in la xakameeyo "degmooyinka". Xiritaanka iyo ka noqoshada qalabka dhalaalida ku lug leh "Birta".
Qin Yuan, oo ah khabiir ku takhasusay dhaqaalaha, ayaa u sheegay weriye ka socda Beijing Business Daily in geeddi-socodka yareynta awoodda wax-soo-saarka birta shantii sano ee la soo dhaafay, "biraha dabaqa" waa la nadiifiyey oo gebi ahaanba waa laga saaray suuqa. Intaa waxaa dheer, qaar ka mid ah "shirkadaha biraha zombie" waa la fasaxay, qaybta kalena dib ayaa loo soo nooleeyay ka dib isdhexgalka. Isku soo ururinta warshadaha birta ayaa sii waday inay kororto, hantida iyo deymaha ee tiro badan oo shirkadaha birta ah ayaa sidoo kale la hagaajiyay lana dayactiray.
In kasta oo natiijooyinka muuqda, Komishanka Horumarinta iyo Dib-u-habeynta iyo Wasaaradda Warshadaha iyo Teknolojiyada Warfaafinta ayaa sidoo kale warka ku tilmaamay in qaar ka mid ah khilaafaadka qotada dheer ee ka jira warshadaha aan weli aasaas ahaan loo xallin. Isla mar ahaantaana, iyadoo la hagaajinayo waxtarka warshadaha biraha, qaar ka mid ah degmooyinka iyo shirkadaha ayaa leh rabitaan ah inay si indho la'aan ah u dhisaan mashaariicda birta, iyo xoojinta guulaha hoos u dhaca awoodda ayaa wajahaya caqabado cusub. Ujeedada shaqadani waa in lagu hago shirkadaha birta ah inay ka tanaasulaan habka horumarka ballaaran ee ku guuleysiga tiro isla markaana lagu dhiirrigeliyo horumarinta tayada sare leh ee warshadaha birta.
Marka laga hadlayo dhibaatooyinka haray, Qin Yuan wuxuu falanqeeyay in marka la nadiifiyo shirkadaha saboolka ah, faa'iidooyinka warshadaha oo dhan ay soo hagaagayaan, iyo rabitaanka shirkadaha inay kordhiyaan wax soo saarkoodu uu xoogaa adag yahay. In kasta oo isbeddelka isbeddelku uu kobcayo, haddana waxay ka dhigan tahay in isdhexgalka uu sii adkaanayo.
Waxaa la fahansan yahay in shaqadani ay sidoo kale dabooli doonto dhismaha iyo hawlgalinta mashaariicda dhalaalida birta, iyo sidoo kale hirgalinta sixitaanka iyo hagaajinta dhibaatooyinka lagu arkay kormeerkii hore. Iyo shaqadan yareynta soosaarida birta ceyriin sanadkaan waxay diirada saari doontaa yareynta wax soo saarka birta ceyriinka ah ee shirkadaha leh waxqabad deegaanka oo liita, isticmaalka tamarta sare, iyo heerarka qalabka teknoolojiyadda oo dib udhac leh, si loo hubiyo in waxsoosaarka birta ceyriin ee sanadka 2021 uu hoos udhigi doono sanadka- sanadka gudihiisa
Kordhi wax soo saarka iyadoo la yareynayo awooda wax soo saar
Inkasta oo awoodda wax soo saarka birta la sii cadaadin doono, shirkadda Lange Steel waxay saadaalisay in baahida isticmaalka birta qaran ay sii wadi doonto inay kororto sanadka 2021, iyo wadarta guud ee baahida birta ceyriin ee Shiinaha sanadka oo dhan waxay gaari kartaa 1.1 bilyan tan, koror ku saabsan 5% sanadkii hore. Xogta ka socota Xafiiska Tirakoobka Qaranka ayaa sidoo kale muujisay in laga soo bilaabo Jannaayo ilaa Febraayo, soosaarka birta doofaarka ee guriga uu kordhay 6.4% sannad-sannadeedka, iyo soosaarka birta ceyriin ayaa kordhay 12.9% sannad-sannadeedka.
Iyadoo la yareynayo awoodda wax soo saarka iyadoo la kordhinayo wax soo saarka, waxay umuuqataa "goobaab qariib ah". Xiao Yaqing wuxuu ka yiri arintaan, dib u soo kabashada dhaqsaha badan, dib u bilaabida shaqada iyo wax soo saarka, iyo baahida loo qabo dhisida qeybaha kala duwan waxay leeyihiin baahi aad u weyn oo ah alaabada ceyriinka ah iyo kuwa kaabayaasha ah, oo ay ku jiraan birta. Intaa waxaa dheer, isticmaalka rasmiga ah ee qof walba ee birta ayaa wali ku jira geeddi-socodka horumarka marka la barbar dhigo wadarta wax soo saarka dhaqaalaha, welina waxaa jira meel badan oo loogu talagalay horumarinta baahida loo qabo dhismaha iyo gaadiidka gawaarida.
Wareysiga uu siiyay weriye ka socda Beijing Business Daily, Cheng Yu, oo ah cilmi baare sare oo ka tirsan Machadka Fahamka, wuxuu falanqeeyay in dhimista awoodda lagu dhammeeyay ballaarinta dalabka. Marka la eego kicinta horumarinta guryaha iyo warshadaha gawaarida, baahida loo qabo birta wali wey xoogan tahay, taas oo sidoo kale abuureysa abuurka biraha. Si loo kordhiyo maalgashiga jawi faa'iido fiican leh, awood wax soo saar aan loo baahnayn ayaa laga hor marin doonaa waqtiga.
Sannadkan, sameynta cilladaha iyo maalgelinta kaabayaasha ayaa sidoo kale u noqon doonta bar bilow muhiim u ah kobaca dhaqaalaha xasilloon, iyo maal-gashiga guryaha ayaa sii socon doona si ay u koraan, taas oo sidoo kale u oggolaan doonta isticmaalka birta gudaha ee Shiinaha inay sii xoojiso 2021. Qin Yuan sidoo kale wuxuu rumeysan yahay in qiimaha hadda ee biraha uu wali sii kordhayo, siyaasadaha ayaa sidoo kale yareynaya canshuur celinta dhoofinta iyo kordhinta soo dejinta si loo daboolo baahida gudaha.
Baahida suuqa ka sokow, waa inaan sidoo kale aragnaa sahayda suuqa. Chen Kexin, oo ah falanqeeyaha guud ee Xarunta Cilmi Baarista Dhaqaalaha ee Lange, ayaa horey u falanqeeyay in sababta keentay in soosaarka sanadkan la filayo inuu sii wado inuu sii kordho ay tahay awoodda wax soo saarka birta ee horumarsan ee sannadihii la soo dhaafay. Sanadka 2021, qaar ka mid ah mashaariicdan cusub ee awooda waxaa la geyn doonaa midba mid ka dib, waxaana la filayaa in weli ay jiri doonaan tobanaan milyan oo tan. Isla mar ahaantaana, heerka ka faa'iideysiga awoodda ayaa sidoo kale sii kordheysa, sidaa darteedna ballaarinta waxsoosaarka sanadkan ayaa wali leh meel cusub.
Caqabadaha cusub ee ku hoos jira hadafka "laba kaarboon"
Si loo gaaro himilooyinka "kaarboon kaarboon" iyo "dhexdhexaadnimada kaarboon", dhammaadkii bishii Diseembar ee sanadkii hore, Xiao Yaqing wuxuu si cad ugu caddeeyay Shirka Wada-shaqeynta ee Warshadaha Qaranka iyo in ujeeddada kaarboon kaarboonka iyo dhexdhexaadnimada kaarboon ay tahay in diiradda la saaro ku saabsan hirgelinta falalka kaarboon-hoose ee warshadaha iyo injineernimada soosaarka Cagaaran. Maaddaama ay tahay warshad tamar-ku-kacsan, warshadaha birta waa inay si adag u dhintaan soo-saarka birta ceyriin si loo hubiyo hoos u dhac sanad-ka-sannadka ah ee soo saarista birta ceyriin.
Aragtida Qin Yuan, cadaadiska saaran warshadaha birta ee ku hoos jira hadafka "laba kaarboon" ayaa u baahan in si gooni ah loo fiiriyo: “Marka laga hadlayo kaarboon kaarboonka, cadaadisku ma noqon karo mid aad u weyn. Iyada oo lagu beddelayo geeddi-socodka gaagaaban geeddi-socodka dheer, dhab ahaantii way caawin doontaa. Yaraynta qiiqa kaarboonka. Geedi socodka soo saarista biraha, wali waxaa jira meelo badan oo lagu yareynayo qiiqa kaarboon, maxaa yeelay shirkadaha birta badan ayaa dejiyay barta ugu sarreysa kaarboon ka hor 2030. ”
Waxaa lagu soo warramey in "Qorshaha Waxsoosaarka Kaarboonka Birta ah iyo Qorshaha Waxqabadka Yaraynta Kaarboon" ay sameeyeen qoraal dib loo eegay oo la hagaajiyay, iyo bartilmaameedka ugu sarreysa ee kaarboonka waxaa markii hore loo dejiyey sida: kahor 2025, warshadaha birta waxay gaari doonaan qiiqa kaarboonka ugu sarreeya; 2030, warshadaha biraha waxay yeelan doonaan qiiqa kaarboonka. 30% ayaa ka hooseeya qiimaha ugu sarreeya, waxaa lagu qiyaasaa in 420 milyan oo tan oo kaarboon qiiqa ay sii deyn doonto.
Qin Yuan wuxuu aaminsan yahay in dhexdhexaadnimada kaarboonku cadaadis dheeri ah saari doonto warshadaha birta. Qiiqa kaarboonka ee soo saarista biraha ee geedi socodka muddada dheer waa mid aan laga fursan karin. Tani waxay u baahan tahay kor u qaadis aad u ballaaran ee habka warshadaha birta. Laakiin maxaa yeelay waqtiga dhibicdu waa daahay, waxay sidoo kale kuxirantahay warshadaha birta ee geeddi-socodka lagu gaarayo kororka kaarboonka. Waa sidee xaaladdu? Qin Yuan ayaa u sheegay wariye ka socda Beijing Business Daily.
Isla mar ahaantaana, waa in la ogaadaa in warshadaha biraha ee geeddi-socodka awoodda-awoodda ay weli weyn yihiin oo ay ku jiraan cadaadis. Kulankii 2021 (Laba iyo tobnaad) ee Madasha Horumarinta Birta iyo Birta ee maalmo ka hor la qabtay, Hu Wenrui, oo ah aqoonyahan ka tirsan Akadeemiyadda Shiinaha ee Sayniska, ayaa sidoo kale carrabka ku adkeeyay: “Warshadaha birta iyo birta waa warshadaha leh qiiqa kaarboonka ugu badan ee ka mid ah 31 qaybaha wax soo saarka, oo qiyaastii ah 15% guud ahaan qiiqa la sii daayo. ”
Waxaa la fahansanyahay inkasta oo qiiqa kaarboon dioxide ee dalkayga halkii tan oo bir ah imika uu sii yaraanayo, wadarta wadartu wali wey ballaadhan tahay. Xiao Yaqing wuxuu horey u sheegay in celceliska isticmaalka dhuxusha adduunka ee halkii tan oo bir ah ay tahay 575kg oo dhuxul caadi ah, marka loo eego Shiinaha oo dhan 545kg. Sababta oo ah mugga weyn ee Shiinaha, weli waxaa jira suurtagal in laga faa'iideysto marka la eego keydinta tamarta iyo yareynta qiiqa.
"Qorshaha Waxsoosaarka Kaarboon Fiican iyo Qorshe Hawleedka Yaraynta Kaarboonka" wuxuu si cad u sheegayaa inay jiraan shan wadiiqooyin waaweyn oo lagu gaaro himilooyinka ugu sarreysa ee warshadaha birta, kuwaas oo kala ah kor u qaadista qaabeynta cagaaran, ilaalinta tamarta iyo waxtarka tamarta, hagaajinta isticmaalka tamarta iyo qaab dhismeedka hannaanka, iyo dhismaha silsilad warshadeed oo wareegsan. Adeegso tiknoolajiyad yar oo kaarboon-yar.
Cheng Yu ayaa sheegay in shuruudaha "laba kaarboon", warshadaha birta ahi u baahan yihiin inay si joogto ah u beddelaan qaabdhismeedka tamarta iyo waxtarka tamarta, laakiin isla mar ahaantaana, beddelidda qaab dhismeedka tamarta ayaa sidoo kale ka dhigan in la beddelo hannaanka biraha, taas oo ah maalgashi aad u weyn. Awoodo badan oo wax soo saar oo markii hore u qalma laakiin aan weli si buuxda hoos ugu dhicin ayaa sidoo kale la tirtiri doonaa goor hore, sidaa darteed faa iidada macdanta birta ayaa wali wajihi doonta caqabado.
Waqtiga boostada: Meey-13-2021
Takhasus ku leh tuubbada qodista foornada qaraxu, tuubo bir ah oo aan xuduud lahayn, qaanso godan iyo alaabooyin kale oo laga dhoofiyo ganacsiga.
Qolka 508, Tower B, Chuangye Dhismaha, Wadada Dongchang, Dongcheng Street, Degmada Dongchangfu, Magaalada Liaocheng, Gobolka Shandong, Shiinaha